Maxaa ka jira in mid ka mid ah saxiixayaashii Galmudug laga saaray liiska odayaasha soo xulaya Xildhibaannada? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in mid ka mid ah saxiixayaashii Galmudug laga saaray...
Maxaa ka jira in mid ka mid ah saxiixayaashii Galmudug laga saaray liiska odayaasha soo xulaya Xildhibaannada?
Nabadoon Imaan Jimcaale Faarax
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Mid ka mid ah Odayaashii Dhaqanka ee saxiixay Galmudug ayaa waxaa laga saaray liiska Odayaasha Dhaqanka, ee lagu wado inay Magaalada Dhuusamareeb ku soo xulaan Xildhibaanada Baarlamaanka soo socda ee Galmudug.
Nabadoon Imaan Jimcaale Faarax oo ka mid ah Odayaashii Dhaqanka ee dhawaan loo diiwaangeliyay inay soo xulaan Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ayaa liiska dhaqanka laga saaray.
Nabadoon Imaan Jimcaale Faarax ayaa wuxuu Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliya uu ku eedeeyay in booskiisa ay ku soo bedeshay nin kale oo ay isu beel yihiin, isla-markaana degan dalka Ingiriiska.
“Magaceygu waxaa uu ku jiraa saxiixe-yaasha lambarka 5aad ee liiska adduunka oo dhan, kuwa rasmiga ayaana ka mid ahay. Aniga oo sugaaya inaan xaroodo ayaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay soo saartay liis kale oo mardhow uu soo saaray Wasiirka Arrimaha Gudaha.” Ayuu yiri Nabadoon Imaan Jimcaale Faarax.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Nin kale oo qaraabo nahay oo qurbajooge ah ayuu igu soo bedelay Wasiirka. Ninkaasi odayga ah oo degan dalka Ingiriiska ayuu ku soo daray liiska Odayaasha Dhaqanka.”
Waxaa uu Wasiirka Arrimaha Gudaha, Cabdi Maxamed Sabriye uu ku eedeeyay in uu musuq maasuq ka dhex wado Odayaasha Dhaqanka, isagoo midkii uu doono meesha ka saaraya, kuna soo bedelaya midka danahooda ka shaqaynaya.
Sidoo kale Nabadoonka ayaa ka dhawaajiyay in xadgudub iyo cadaalad darro ay tahay waxa ka soconaya Magaalada Dhuusamareeb, musuq maasuqa ugu xoogana lagu hayo Odayaasha Dhaqanka.
Ninkan odayga ah ayaa wuxuu soo hadalqaaday in Dowladda Somaliya ay sheegato inay la dagaalamayso musuq maasuqa, balse aanay taasi muuqan.
“Dowladda Somaliya musuq ayaan la diriraynaa ayay tiraahdaa, laakiin taas meesha kama muuqato. Wixii lagu heshiiyay oo ahaa in Galmudug ay saxiixe-yaasheeda aas aas u noqdaan ayaa laga booday.” Ayuu yiri Nabadoon Imaan Jimcaale oo Warbaahinta ka soo muuqday.
Waxaa isa soo taraaya qaylo dhaanta ka soo yeeraysa Odayaasha Dhaqanka ee ku aadan musuq maasuqa baahsan, ee ay sheegayan inay hareeyeen dhismaha Galmudug-ta cusub. Odayaasha reer Galmudug waxay Dowladda Federaalka ka dalbanayan inay joojiso fara-gelinta, ay ku hayso maamulka dadka deegaanka loo yegleelayo.
liiska laga saaray
Mid ka mid ah saxiixayaasha Galmudug
soo xulista xildhibaanada Galmudug